ट्विटरको बारेमा @ जैकमा खुला पत्र Martech Zone
एक बर्षको लागि, मैले हाँसो गरें कि ट्विटर केटी जस्तै हो जुन स्कूलमा मलाई क्रस गरिएको थियो जसले मलाई दिनको समय दिँदैन। एक पटक हामीले बेसमेन्टमा बोतललाई स्पिन खेलेका थियौ, र उसले बोतललाई मेरो छेउमा मेरो छेउमा चुम्बन गर्न लगाई कि त्यो एक मूर्ख थियो। उसले मेरो मुटु तोड्यो। र अन्ततः उसले उनको भ broke्ग। हामी दुबै हरायौं। ट्विटर पनि हराइरहेको छ।
तपाईंले लेख्नुभयो तपाईंको आय कल:
हामी रिपोर्ट गर्न रोमाञ्चित छौं कि दैनिक सक्रिय प्रयोग लगातार quarter तेस्रो त्रैमासिकको लागि द्रुत भयो, र हामी देख्दछौं कि कडा वृद्धि निरन्तर चलिरहेको छ।
मलाई पक्का छैन कि को हो We हो, तर जब मैले यो शब्द सुने दैनिक सक्रिय उपयोग छिटो, मैले एउटा आँसु बहाएँ। तपाईं ज्यादै चुम्बन गर्दै हुनुहुन्छ। र यो बेकार छ किनभने म तपाईं एक मायालु थिए।
तपाईं ट्विटरको बारेमा सुनेको बिना एक दिन जानुहुन्न।
जबकि यो सत्य हो, एक अर्काको साथ इमानदार हुनुपर्छ। त्यो मूल रूपमा किनभने शब्द हो tweeted नाम पछि आयो डोनाल्ड ट्रम्प एक बर्ष भन्दा बढी को लागी।
त्यो मान्छे तपाईलाई धेरै परवाह छैन वास्तवमा एकमात्र कारण यो छ कि बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले गत बर्षमा ट्विटरको बारेमा सुनेका थिए। र यस्तो देखिन्छ कि यस बर्ष जारी रहनेछ। सायद यो उपहार जुन Twitter लाई यसको पहिलेको महिमामा ल्याउँदछ।
म ह्याक होइन
त्यो भन्दा पहिले म अनलाइन उद्योगमा काम गर्दैछु र परम्परागत विपणन। समाचारपत्रहरूले आत्महत्या गरेको मैले देखेको थिएँ, पाठकहरूले उनीहरूलाई मोल गरेको र यसलाई आँखाका खेलाडी र कूपनको लागि व्यापार गर्थे भन्ने पत्रकारिता प्रतिभालाई वेवास्ता गर्दै। तिनीहरू धक्कामा प्रेममा परे।
मैले लगनशील अनुसन्धान गरेको छु र सास परामर्श प्रदान गरेको छु $ billion बिलियन भन्दा बढी लगानी र अधिग्रहणमा। मैले भविष्यवाणी गरे (धेरै अरूले गरे) खोज उद्योगको खैरो पक्षको निधन। म एक्स्ट्याक्टरेटको बृद्धिको प्रारम्भिक अंश थिएँ र अर्को कम्पनी सुरू गर्न मद्दत गर्‍यो जसले ओरेकललाई बेचे। म मार्केटिंग टेक्नोलोजीको बारेमा हरेक दिन लेख्छु। म वरिपरि
र म ट्विटर मन पराउँछु ... उनले मलाई ध्यान दिएन।
म कसरी विश्वास गर्दछु ट्विटर वरिपरि घुम्न सक्छ ... द्रुत रूपमा
प्वाइन्टमा सिधा जम्प गरौं। म ट्विटरमा निराश छु किनकि मलाई लाग्छ कि समस्या तपाईले बनाउनु भएको भन्दा कम जटिल छ। र किनभने म विश्वास गर्दछु कि तपाईं बढ्दो संख्याको प्रेममा डुब्नुभयो - झटका - जसले तपाईंको आत्महत्यालाई निम्त्याउँदैछ।
ट्विटर अनुभव एक अद्भुत व्यक्ति, ब्रान्ड, वा जेनियसको १ 140० क्यारेक्टरहरूमा भरिएको अविश्वसनीय खोज हुन्थ्यो। अनुभव अब मा कुराकानी गर्न को लागी कोशिश गर्नु जस्तै हो सबैभन्दा ठूलो मोश खाडल ग्रहमा। (म सधैं लेखमा मोश पिट भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहान्छु)।
ट्विटरमा आवाज निस्सन्देह हो ... र तपाईं त्यो बृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ सक्रिय प्रयोग.
यहाँ के म तुरुन्त सिफारिस गर्दछु:
ब्लक दोहोर्याइएको ट्वीट्स। पागलपन रोक्नुहोस्। मेरो ट्विटर खातामा, जब म एक ट्विट प्रमोट गर्न भुक्तान गरिरहेको छु तबसम्म मलाई समान समयावधिको लागि उही ट्वीट दोहोर्याउन अनुमति दिइनु हुँदैन। म किन दिन सक्छु जब म मात्र दिन बेर प्रतिध्वनि विस्फोट गर्न सक्छु? सुझाव: म तपाईंलाई भुक्तान गर्दैन।
को लागी शुल्क एपीआई उपयोग प्रति प्रकाशित ट्वीट। यो धेरै हुनु आवश्यक छैन ... तर एक प्रकाशकको ​​रूपमा, म खुशीसाथ मासिक सदस्यता तिर्ने छु जहाँ म मेरो लेखहरूको बारेमा स्वचालित रूपमा चेतावनीहरू ट्वीट गर्न सक्दछु ताकि मेरा अनुयायीहरूले प्रतिक्रिया जनाउनेछन्। स्पामर्स छैन। तिनीहरू जान्छन्।
# एडी उपयोगको लागि चार्ज प्रति प्रकाशित ट्वीट। प्रत्येक दिन लाखौं डलर तपाईंको प्लेटफर्मको माध्यमबाट बगिरहेको छ कि तपाईंले मुद्रीकरण गरिरहनु भएको छैन। हो, मेरा साथीहरूले यो सुझाव को लागी मलाई घृणा गर्नेछन्, तर म तिमीलाई मद्दत गर्न कोशिस गर्दैछु - तिनीहरूलाई होइन। यसले याचनाहरू घटाउँदछ, र हामी सँधै स्प्यामरलाई ब्लक गर्न वा लात लगाउन सक्दछौं जसले ट्याग नगरी विन्ती गर्दछन्।
थप अप्ट-इन प्रत्यक्ष सन्देशहरू। म गर्न सक्दिन र मेरो डीएमहरू जाँच गर्न सक्दिन किनकी तिनीहरू नियन्त्रण बाहिर छन्। मलाई थाहा छैन कि कहाँबाट सुरु गर्ने तर केहि प्रयोगकर्ताहरू मलाई गोप्य रूपमा बोल्ने अनुमति दिन अवसर मन पराउँथे। अहिले तिनीहरू हजारौं अन्य सन्देशहरूसँग मिसिएका छन् र म तिनीहरूलाई जाँच गर्न अस्वीकार गर्दछु।
मलाई पछ्याउन ईमेलहरू पठाउन रोक्नुहोस् पप संस्कृति ट्विटर खाताहरू जुन मलाई पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक छन्। यदि तपाईंले मेरो कुरा सुन्नुभयो (उदाहरणका लागि हेर्नुभयो कि म कोसँग कुराकानी गर्छु), तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कि कान्ये वेस्ट र जस्टिन बिबर त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसमा म शून्य रुचि राख्छु। जबकि तपाईं आफूलाई केही सामाजिक टीएमजेडको रूपमा सोच्नुहुन्छ, यो किन होइन किनकि म तपाईंलाई प्रयोग गर्छु ... र अरू लाखौंले तपाईंलाई कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने होइन।
फरक पार्नुहोस् व्यक्तिबाट ब्रान्ड। त्यहाँ भिन्नता धेरै हुनु आवश्यक छैन, तर यो आश्चर्यजनक हुनेछ यदि मैले भिन्नता भन्न सकें भने। म फिल्टर र व्यक्तिगत र व्यावसायिक कुराकानी बीच मेरो फिड खण्ड गर्न सक्छ।
अंगालो भएको एक ग्राहक सेवा च्यानल। लाखौं गुनासोहरू र समीक्षाहरू तपाईंको प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्येक दिन पारित हुन्छन् र निगमहरूमा जान्छन् जसले तिनीहरूलाई खिच्न सोशल मिडिया अनुगमन उपकरणहरू खरीद गर्दछन्। तपाईं किन यसको लागि उपकरणहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्न? किन ट्विटरले तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरूबाट कार्पेटलाई बाहिर तान्दैन र यो आफै गर्छ? मलाई मेरो साइटमा समीक्षा बोट मनपर्छ जुन मलाई ट्याग गर्दछ र टि्वटरमा प्रकाशित गर्न विश्वको लागि। म तपाईंलाई ब्रान्ड प्रोफाइलको भागको रूपमा स्वभाव र समीक्षा स्वत: प्रदान गरेको हेर्न चाहन्छु।
कृपया यसलाई ठीक गर्नुहोस् आन्तरिक खोजी र स्वत: पूर्ण शुद्धता त्यो मैले प्रयोग गर्नु पर्छ साइट: twitter.com ट्विटरमा व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन गुगलमा खोजी हास्यास्पद छ।
त्यहाँ तपाईं संग, जैक। म आशा गर्छु कि ट्विटर त्यो झोकामा टाँसिनेछैन कि उसले पार्टीहरुमा चुम्बन गरिरहेकी छ। उपयोग ज्याक लात र सगाई संलग्नता। ट्विटरको साँचो प्रेम यहाँ बसिरहेको छ।
Psst ... मलाई कल गर्नुहोस्। 😉
टैग: डोनाल्ड ट्रम्पजैकdorsey jackट्रम्पट्विटरमा ट्रम्पTweettwitter